‘आर्थिक र सामाजीक रुपान्तरण गर्ने छु ।’ - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
सुन्दरमणी आचार्य,प्रतिनिधि सभा
काभ्रे क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार
पाँचखाल नगरपालिका पिता शरणप्रसाद आचार्य माता प्रेमकुमारीको छोरा सुन्दरमणी आचार्यको जन्म २०३५ पौष ९ गते भएको हो । २०५४ सालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएका सुन्दरमणी आचार्य नेपाल विद्यार्थी संघ काभ्रेको २०५८ देखि २०६४ सम्म सभापति पदमा रहेर युवा वर्गलाई संगठीत गर्ने कार्य गर्नुभयो । यसअघि साविक काभ्रे क्षेत्र नं. ४ को क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो । हक्की स्वभावका युवा नेता सुन्दरमणी वि.पि. समाजवाद र मदन भण्डारीको बहुदलीय नौलो जनवादका नाममा मात्र राजनीति गर्ने हैन देशको विकास र समृद्धिको सवालमा प्रतिस्पर्धा गरौँ स्थानीय जनताको आवश्यकता, इच्छा र चाहना भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विकास निर्माण गरौँ अनि मात्र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । काभ्रे क्षेत्र नं. २ क मा नेपाली कांग्रेस काभ्रेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार बन्नुभएका आचार्यसँग आगामी मंसिर २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी जनताप्रतिको विकासको अपेक्षासँग सम्बन्धीत रहेर रेडियो एबिसी एफ.एम. ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
० राजनीतिमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जन्मदाता संविधान निर्माण गर्न मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्ने सबै जनताको हित चिताउने सुख दुःखमा साथ दिने पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीमा म २०५४ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढेको हँु । समाजमा देखिएको विकृति र विसंगती हटाउन राजनीतिमा लागेको कुरा बताउन चाहन्छु ।
० आगामी मंसिर २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिदै छ, चुनावी अभियानमा कसरी जुट्दै हुनुहुन्छ ?
विगत वर्षका निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचन नितान्त फरक ढङ्गको छ । देशमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नयाँ संघीय संरचना अनुरुपको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि संघ केन्द्रिय संघको निर्वाचन हो । धलिखेल र पाँचखाल र पण्डन देउपुर नगरपालिकाका वडाहरु कोशीपारीको भुम्लु गाउँपालिका वडाहरुमा कार्यतालिका निर्माण गरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका चुनावी तालमेलका साथ सबै एकजुट भइ सहरदेखि गाउँ गाउँसम्म चुनावी अभियानमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस चुनावी अभियानमा जुटेको छ । आम मतदाता नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्न व्यग्र प्रतिक्षामा रहनुभएको छ र के युवा के जेष्ठ नागरिक सबैले हामीहरुलाई ठाउँ ठाउँमा स्वागत सत्कार गर्नुभएको छ । हामी सबै जनताको सुख दुःख कष्टमा साथ दिने पार्टी भएकाले यो सम्मान पाएको मैले महसुस गरेको छु ।
० जनताहरुको बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको क्षेत्र काभ्रे क्षेत्र नं. २ ‘क’ को समग्र विकास गर्ने यहाँका नविनतम सोच चाहि के छन् ?
धुलिखेल नगरलाई इलेक्ट्रीसिटी र पर्यटकीय क्षेत्रको नमुना नगरको रुपमा विकास गर्ने, पाँचखाल नगरलाई कृषि क्षेत्रको हवको रुपमा विकास गर्ने, कृषिजन्य पदार्थको उपजमा वृद्धि गर्न किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट उन्नत जातका बिउबिजन मलखाद, आधुनिक कृषि औजार सबै किसानलाई उपलब्ध गराउनेछौँ । पलाञ्चोक भगवती क्षेत्रलाई धार्मिक र साँस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, यस क्षेत्रको गाउँ नगर जोड्ने वडाहरुको मोटरबाटोको स्तर उन्नती गर्ने, सम्भावना भएका स्थानमा तुरुन्त सडकहरु पिच गर्ने, प्रत्येक घर घरमा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन एकीकृत खानेपानी योजना निर्माण गर्ने, इन्द्रावती र भोटेकोशीको पानीलाई लिफ्टीङ गरेर पानीको अभावलाई परिपुर्ति गर्ने । पाँचखाल र मण्डनदेउपुर नगरमा प्रचुर मात्रामा आलु तथा तरकारी खेती हुने भएकाले सुपरजोन अवधारणा लागु गरि कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, दोलालघाट क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थल निर्माण गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आगमनलाई वृद्धि गरि नागरिकहरुको आयस्रोत बढाउने कार्य गर्नेछौँ । पशुपालन, मत्स्यपालन, कुखुरापालन व्यवसाय सञ्चालन गरि उद्यमशिलताको विकास गरि स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने, ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य र शिक्षाको पहँुच पु¥याउन भुकम्पले क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण तत्काल थाल्न सम्बन्धीत सरकारी निकायमा पहलकदमी थाल्ने, भुकम्पबाट क्षति भएर पुनः निर्माण कार्यले तिव्रता नपाउँदा जनताहरु छाप्रोमा बसोवास गर्नुपरेको छ । त्यसलाई तिव्रता दिन गाउँपालिका, नगरपालिका र पुनः निर्माण प्राधिकरणसँगै समन्वय गरि सरकारले दिने भनेको ३ लाख रकम तुरुन्त दिने व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
० यहाँको विजयी हुने आधार चाहि के हुन त ?
म नेपाली कांग्रेसको कुशल संगठक, एक पार्टीको सिपाही हँु । विद्यार्थी संगठनमा २ पटक सभापति भएर युवावर्गलाई संगठीत गर्ने कार्य गरेको छु । हाम्रो पार्टीको सबै भात्रीसंगठन चलायमान छन् । आम कार्यकर्ता चुनावी अभियानमा जुट्नुभएको छ । पार्टीका अग्रजहरुको साथ सहयोग युवावर्गको पार्टीमा भएको लगनशिलता, नेपाली कांग्रेस पार्टी जीवनभर जनताको स्वतन्त्रता नागरिकको हक अधिकारको लागि लडेको पार्टी हो । यहि हो मेरो विजयी हुने आधार । म काभ्रे क्षेत्र नं. २ को ‘क’ जनताका आवश्यकता अनुसारको विकास, सुख दुःखमा सधैँ लागेको छु निरन्तर लागि पर्नेछु । त्यसैले नेपाली कांग्रेस काभ्रेका सबै उम्मेदवार मतदान गरेर विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
० २०४६ सालपछि देशमा सत्ताको वागडोर हाँक्ने पार्टी त नेपाली कांग्रेस हो, देशमा विकासले गति लिन सकेन नी ?
राजनैतिक पार्टी भनेका देश विकासका संवाहक हुन नेता जनताका सेवक हुन् । २०५२ सालदेखि देश सशस्त्र युद्धमा फस्यो । माओवादी पार्टीले देशलाई युद्धमा धकेलेर विकास निर्माणले गति लिन सकेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको विकास सञ्चार क्षेत्रको विकासमा ठुलो भुमिका खेलेको छ । सहर तथा गाउँमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्था र बैंकको कारणले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठुलो फट्को मारेको छ । जनताले आफुले गर्न चाहेको घरेलु तथा साना उद्योगदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरि उद्यमशिलताको विकास गर्न सकेका छन् र आर्थिक उन्नतीको बाटो फराकिलो भएको सबैमा जग जाहेर छ ।
० पार्टीबाट पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने आफ्नै पार्टीको र कार्यकर्ताको मात्र विकास हुने देशको विकास र आर्थिक समृद्धि चाहि कहिले हुने त ? यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तपाइँ जस्ता युवाहरुले पार्टीमा आन्तरिक विद्रोह गर्नु पर्दैन ?
संसदीय राजनीतिमा पार्टीको संसदीय दलको फाँटबाट संसदीय दलको नेता छनौट हुन्छ । छनौट भएका नेता अवसर प्राप्त हुँदा उहि नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो पद्धती नफेरिउञ्जेल यहि अवस्थाबाट चल्छ नै । अब एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने हैन स्थिर सरकार गठन गरि ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । त्यो कार्य सफल बनाउन नेपाली कांग्रेस पार्टीले अत्याधिक बहुमत ल्याउँछ र अब देशमा विकास र आर्थिक समृद्धिका बाटाहरु फराकिला हुदै जानेछन् । नराम्रो पुरानो पद्धतीलाई हामी युवावर्गले नयाँमा ढाल्न पार्टीभित्र कुरा उठान गरेका छौँ अब त्यस्तो हुँदैन भन्न चाहन्छु ।
० लोकतन्त्रको खम्बा भन्ने संविधानमा नै किटेर ३३% महिलालाई राजनीतिमा सिट सुरक्षित गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा खोइत महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएको ?
हो यहाँले उठाएको प्रश्न सान्दर्भिक छ । स्थानीय तहमा ४०% महिलाहरुलाई नै स्थान दिइएको छ । अब प्रदेश र केन्द्रमा महिलाहरु प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । निर्वाचनपछि समानुपातिक कोटाबाट ३३% महिला चाहि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सहभागिता जनाइने छैन । वाम गठबन्धनको कारण देशमा अधिनायकवाद हावि हन्छ भनेर प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले महिलालाई टिकट प्रदान नगरेको हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
काभ्रे जिल्लाका सम्पुर्ण मतदाताहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको मुलमन्त्र हो । देश विकासको संवाहक हो । यसले देशका सबै नागरिकको वृहत्तर आर्थिक हित, दुःखी निमुखा वर्गको आर्थिक उन्नती, सभ्य समाजको निर्माण गर्ने भएको हुदाँ मत दिने भनेको मन दिने हो । योग्य सक्षम उम्मेदवार छनौट गरि मतदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । चरित्रवान विकासप्रेमी पार्टीका उम्मेदवार को हुन राम्रो नराम्रो के छ बढो सचेतका साथ मतदान गर्नुहोस भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले काभ्रे जिल्लाका नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवारहरुले रुख चिन्हमा छाप लगाइ मतदान गर्नुभयो भने विजय सुनिश्चित हुन्छ । काभ्रे जिल्लाको समग्र विकास गरि नमुना जिल्ला बनाउने हाम्रो योजना पुरा हुन्छ त्यसैले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिनु भन्न चाहन्छु । मेरो विजय सँगै यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजीक रुपान्तरण गर्ने छु ।